နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်း ဝေဖန်မှုသာရ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးကိုမေးခွ န်းတစ် ခုမေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း – Shwe Likes
Examplez အဖွဲ့က အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းြ ဖစ်သလို အကယ်ဒမီဆုရ မင်းသား တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်း ကတော့ စစ်အာဏာ သိမ်းမှုဖြစ်စ ဉ်ပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူေ တွနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ Speak Out မလုပ် တော့ပဲ တိတ်ဆိ တ်သွားခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်ကျော်တိုင် ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပြီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှ ပရိသတ် တွေကို နှစ်သစ်ဆုမွန်ေ ကာင်းတောင်းပေး ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းဟာ ပရိသတ်ေ တွရဲ့ မေတ္တာကိုမရရှိပဲ ဝေဖန်မှုေ တွနဲ့သာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွန်းထွန်းက သူ့အနေနဲ့ မင်းသား မင်းမော်ကွန်းလို အဆုံးထိမစွန့် လွှတ်နိုင်တာ အပစ်လားဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ တာကို အခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့တခုေ လာက်ပြောပါရေ စဗျာ။ ကျနော့်ခံယူ ရပ်တည်ချက် က၂၀၂၁ Feb ၁ ရက်နေ့ကတည်းက အခုအချိန် အထိ ဘာမှကို မ ပြောင်း လဲပါဘူး။ ကျနော်က ကျနော်တို့ရဲ့ တပွင့်တည်းသော နှင်းဆီ လို အဆုံးစွန်အထိ မစွန့်လွှတ်နိုင် တာကအပစ် တခုလုပ်မိ သလိုဖြစ်တာ လားဗျာ? တစ်နှစ်ပတ်လုံး Covid တွေရော , အခြား သော ဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေတွေနဲ့ ဘယ်အချိန် ဘာဖြစ်မ လဲဆိုတာ မသိရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်လည်း ခင်ဗျားတို့နဲ့ နည်းတူ မိသားစုနဲ့ အဆင်ပြေဖို့ ရှင်သန်နေရတာပါဗျာ။ အနုပညာသမားမို့ လို့ ပြည့်စုံနေလိမ့်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့”
“ကျန်တဲ့ သူတွေတော့ ကျနော်မသိပါဘူးဗျာ။ ကျနော် ကတော့ ဘဝ ကို အစကပြန်စဖို့ကြိုး စားနေရတာပါ။ ကျနော့်ကို ဒီမှာ comment တွေရေးနေကြတဲ့ သူတွေ အားလုံးလ ည်း ဒီလိုပဲ ရင်ဆိုင်နေကြ တယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် social media တွေမှာ ပီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လုံးလုံးမှာ အရာရာပုံမှန် ပြန်ဖြစ်နေသလို ဘာတခုမှ မလည်ပတ် အသုံးမပြုခဲ့ပဲ social media ကို rest လုပ်ပီး ငြိမ်သက် ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ပြီးတော့အ ခုချိန်အထိ ကျနော် ဘာအကူအညီကိုမှ မယူခဲ့သလို ဘာနဲ့မှလည်း လုံးဝမပတ် သတ်ထားပါဘူး. (ဘယ် မှ လည်း မ မပါ). ရည်မှန်းချက်တူ သူအချင်းချင်း ဆိုရင် ပို ဘော ပြီးတော့ နားလည်ကြရအောင်. ကျန်တာကတော့ အပေါ်ကျနော် ရေးထားတဲ့ ဆုတောင်း စာလေးလိုပါပဲဗျာ.” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါ တယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ ထွန်းထွန်းရဲ့ ခံစားချ က်ကို နားလည်သလို တချို့ကတော့ မင်းမော်ကွန်းကိုပါ ဆွဲထည့်ပြီး တစ်ပွင့်တ ည်းသော နှင်းဆီလို အဆုံးထိမစွန့် လွှတ်နိုင်တာအပစ်လား လို့ဆိုတဲ့စကားကိုပိုပြီးစိတ် ဆိုးနေကြတာပြဲ ဖစ်ပါတယ်။Source: Tun Tun . Examplez’s fb
Examplez အဖြဲ႕က အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္လည္းျ ဖစ္သလို အကယ္ဒမီဆုရ မင္းသား တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ထြန္းထြန္း ကေတာ့ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈျဖစ္စ ဥ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူေ တြနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Speak Out မလုပ္ ေတာ့ပဲ တိတ္ဆိ တ္သြားခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွ ပရိသတ္ ေတြကို ႏွစ္သစ္ဆုမြန္ေ ကာင္းေတာင္းေပး ခဲ့တဲ့ ထြန္းထြန္းဟာ ပရိသတ္ေ တြရဲ့ ေမတၱာကိုမရရွိပဲ ေဝဖန္မႈေ တြနဲ႔သာ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရ ပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထြန္းထြန္းက သူ႔အေနနဲ႔ မင္းသား မင္းေမာ္ကြန္းလို အဆုံးထိမစြန႔္ လႊတ္နိုင္တာ အပစ္လားဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ တာကို အခုလိုပဲေတြ႕ရပါတယ္။
“ဟုတ္ကဲ့တခုေ လာက္ေျပာပါေရ စဗ်ာ။ က်ေနာ့္ခံယူ ရပ္တည္ခ်က္ က၂၀၂၁ Feb ၁ ရက္ေန႔ကတည္းက အခုအခ်ိန္ အထိ ဘာမွကို မ ေျပာင္း လဲပါဘူး။ က်ေနာ္က က်ေနာ္တို႔ရဲ့ တပြင့္တည္းေသာ ႏွင္းဆီ လို အဆုံးစြန္အထိ မစြန႔္လႊတ္နိုင္ တာကအပစ္ တခုလုပ္မိ သလိုျဖစ္တာ လားဗ်ာ? တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး Covid ေတြေရာ , အျခား ေသာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ဘာျဖစ္မ လဲဆိုတာ မသိရတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ နည္းတူ မိသားစုနဲ႔ အဆင္ေျပဖို႔ ရွင္သန္ေနရတာပါဗ်ာ။ အႏုပညာသမားမို႔ လို႔ ျပည့္စုံေနလိမ့္မယ္လို႔မေတြးပါနဲ႔”
“က်န္တဲ့ သူေတြေတာ့ က်ေနာ္မသိပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ ကေတာ့ ဘဝ ကို အစကျပန္စဖို႔ႀကိဳး စားေနရတာပါ။ က်ေနာ့္ကို ဒီမွာ comment ေတြေရးေနၾကတဲ့ သူေတြ အားလုံးလ ည္း ဒီလိုပဲ ရင္ဆိုင္ေနၾက တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ့ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ social media ေတြမွာ ပီးခဲ့တဲ့ ၁ ႏွစ္လုံးလုံးမွာ အရာရာပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္ေနသလို ဘာတခုမွ မလည္ပတ္ အသုံးမျပဳခဲ့ပဲ social media ကို rest လုပ္ပီး ၿငိမ္သက္ ေပးခဲ့ ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့အ ခုခ်ိန္အထိ က်ေနာ္ ဘာအကူအညီကိုမွ မယူခဲ့သလို ဘာနဲ႔မွလည္း လုံးဝမပတ္ သတ္ထားပါဘူး. (ဘယ္ မွ လည္း မ မပါ). ရည္မွန္းခ်က္တူ သူအခ်င္းခ်င္း ဆိုရင္ ပို ေဘာ ၿပီးေတာ့ နားလည္ၾကရေအာင္. က်န္တာကေတာ့ အေပၚက်ေနာ္ ေရးထားတဲ့ ဆုေတာင္း စာေလးလိုပါပဲဗ်ာ.” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့ပါ တယ္။
ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ထြန္းထြန္းရဲ့ ခံစားခ် က္ကို နားလည္သလို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္းကိုပါ ဆြဲထည့္ၿပီး တစ္ပြင့္တ ည္းေသာ ႏွင္းဆီလို အဆုံးထိမစြန႔္ လႊတ္နိုင္တာအပစ္လား လို႔ဆိုတဲ့စကားကိုပိုၿပီးစိတ္ ဆိုးေနၾကတာျပဲ ဖစ္ပါတယ္။Source: Tun Tun . Examplez’s fb